Linux Mint 12 "Lisa" dị | Site na Linux
Linux Mint 12 "Lisa" dị
Ọtụtụ ndị ọrụ nọ na-eche maka akụkọ a na n'ikpeazụ dị n’etiti anyị Linux Mint 12 "Lisa", nkesa na-anwa ịnyefe ndị ọrụ nke otu ahụmịhe ahụ Gnome nke 2na Gnome nke 3.
Kedu otu esi enweta nke a? N'ihi na MGSE, otu ndọtị maka Gnome shei na-agbalị na-enye otu functionalities dị ka Gnome nke 2. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị chọrọ anyị nwekwara ike iji MGBE, ndụdụ nke Gnome nke 2 nke akabeghị 100% kwụsie ike, mana o doro anya na ọ ga-emecha nke nta nke nta.
Banyere mgbanwe anyị nwere ugbua ekwuru na mbu, Artwork ọhụrụ, ọtụtụ ndozi na igwe nchọta ọhụụ na ndabara, yabụ ugbu a naanị ị ga-ebudata ya njikọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Linux Mint 12 "Lisa" dị
M nwara RC na ụkpụrụ, ọ masịrị m, mana mgbe m hụrụ oke oriri nke RAM, enwere m mmechuihu.
Daalụ maka akụkọ, eziokwu bụ na m na-eche ya. N'ezie, ebe nrụọrụ weebụ LinuxMint dị ezigbo mkpa. O yiri ka ọ dị ọtụtụ ndị chọrọ imikpu ezé ha!
Site n'ụzọ, ọ bụ ụdị Ubuntu ka ọ bụ nke Debian? Nke m choro bu LMDE !!!
Nke ahụ bụ ụdị mbipute Ubuntu.
LMDE na-adabere na ebe nchekwa Debian, yabụ nhapụ ewepụtaghị otu 😀
Echere m na ha jisiri ike na-enye ya a kpochapụwo aka na-eme ka ị na-echefu na ị na-eji gnome 3 shei, oké ọrụ.
Ọ bụ ezie na echere m na ha kwesịrị imelite akara ngosi, dịka ọmụmaatụ faience. Na isiokwu windo (mechie, belata ma bulie bọtịnụ) Mint-x masịrị m.
Ekwenyesiri m ike na ha bụ ihe ndị a ga-eji nwayọ nwayọ. Ihe dị mma banyere LM bụ na ha na-ege Community ha ntị nke ukwuu, yabụ ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịbute (ma ọ bụ gị onwe gị) echiche ndị ahụ, a ga-anụ ha ma mezuo ha.
Citrus: interface ọhụrụ maka LibreOffice?
Fedora Utils ma ọ bụ otu esi ebuli Fedora gị